Francisco Del Rosario Sanchez aive ani, baba vekusununguka kweSanto Domingo? - Afrikhepri Foundation
Chitatu, Nyamavhuvhu 12, 2020
Francisco del Rosario Sánchez, akaberekwa 9 Kurume 1817 muSanto Dominguo uye akapfurwa akafa munaKurume 4, 1861 aive gweta uye wezvematongerwo enyika achibva kuHispaniola, co-muvambi, naJuan Pablo Duarte naRamón Matías Mella, veRepublic iripo Dominican. Vatatu vacho ndiPadres de la Patria (baba). Akatsiva Juan Pablo Duarte y Diez, mukurwira rusununguko panguva yaakatapwa uye akazivisa rusununguko rweDominican Republic munaFebruary 27, 1844.
Francisco del Rosario Sánchez akaberekerwa muSanto Domingo munaKurume 9, 1817. Baba vake vakadaidzwa kuti Narciso Sánchez Ramona uye amai vake vakanzi Olalla del Rosario de Belén Fernández, aive Afro-wedzinza. Vabereki vake vaive vasina kuroora panguva yekuzvarwa kwake. UFrancisco ndiye aive mukuru pavana gumi nemumwe, mumwe wavo, Socorro Sánchez, akazvisimbisa semunyori wenhau. Sánchez aivawo muzukuru kudivi rababa veMaría Trinidad Sánchez.
Kutanga akadzidziswa naamai vake, akazova mudzidzi wemupristi wePeru, Gaspar Hernández, uyo akatanga mweya wake wekuda nyika. Kunyangwe zvake aizvidzidzisa, ainyatsoziva French neLatin, akawana tsika ine hunyanzvi uye akazvisiyanisa naye mukuteterera kwake segweta.
Iye aive mupepeti we manifesto yerusununguko waNdira 16, 1844 chiitiko chechokwadi cherusununguko uye ndiye akatanga kusimudza mureza wenyika yeDominican musi waFebruary 27, 1844.
Akasungwa zvichitevera mumiriri weEl Cercado kwaakakuvara, akaendeswa kuSan Juan de Maguana kwaakatongerwa rufu ndokupfurwa munaKurume 4, 1861 aine makumi maviri nevaaifamba navo nenguva dza20 p.m. Anoramba akazorora neaya evamwe baba vaFata Munyika Juan Pablo Duarte naRamon Matias Mella mune imwe nzvimbo "maatari eGore renyika" ari mupaki yerusununguko padyo nePuerta del Conde iyo yakaziviswa rusununguko. Ichi chifananidzo chakavhurwa munaKurume 27, 1976.